ဆီးကျိတ်ကင်ဆာသုတေသန - ဆွေးနွေးမှုသင်၏ ဦး နှောက်
ဆီးကျိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက်. အထောက်အထား
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်အမှန်တကယ်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအများအပြားသီးခြားအချက်များနှင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုတိုင်းတာကြပြီ သုတ်ရည်လွှတ်, လိင်ဆက်ဆံမှုအကြိမ်ရေ, အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ, လိင်လက်တွဲဖော်အရေအတွက်နှင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါဖြစ်ပွားမှု။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိလေ့လာမှုနီးပါးတိုင်းအချက်အပေါ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ပဋိပက္ခရလဒ်များနှင့်ဆေးပညာဆီးကျိတ်ကင်ဆာများအတွက်အန္တရာယ်အချက်ဖြစ်သုတ်ရည်လွှတ်အကြိမ်ရေ (သို့မဟုတ်ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သော) ထည့်သွင်းစဉ်းစားမထားဘူး။
“ ကျွန်မမကြာခဏသွားလေ့ရှိတဲ့ယောက်ျားတွေရဲ့ sites တွေမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်အခြေခံကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကဆီးကျိတ်အတွက်ကောင်းတယ်။ မင်းလုပ်သင့်တာတစ်ခုကကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုပြောတာကသူ့စိတ်ကသူ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်၊
အဆိုပါလူကြိုက်များစာနယ်ဇင်းကောင်းသောခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်စေရလဒ်များအထီးကျန်ရှုထောင့်နှင့် ပတ်သက်. ဆူညံသံအများကြီးဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ အောက်ပါနှစ်ခုလေ့လာမှုများထက်ပိုသုတ်ရည်လွှတ်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာတစ်လျော့နည်းသွားအခွင့်အလမ်းမှဆက်နွယ်နေပါသည်ကြောင်းအထောက်အထားအဖြစ်ကိုးကားအဓိကသူများဖြစ်ကြ၏။
GG Giles, et al ။ , "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များနှင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ"BJU International သည် 92 (3), ဇူလိုင်လ 2003: 211-216 ။
MD Leitzmann, "သုတ်ရည်လွှတ်ကြိမ်နှုန်းနှင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၏နောက်ဆက်တွဲအန္တရာယ်" ဂျေအေအမ်အေ, 291 (13), ဧပြီ 2004: 1578-1586 ။
ပထမဦးစွာကျဆင်းခြင်းအန္တရာယ်မှသာဘာသာရပ်များနှစ်ဆယ်ကျော်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်သုက်ဖို့လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ ဒုတိယ, ဒေတာအစောပိုင်းကဆယ်စုနှစ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်အရာကိုစာမျက်နှာပေါ်တွင်အခြေခံခဲ့သည်။ အဆိုပါတတိယ ဂျေအေအမ်အေ 2004 သူတို့ရဲ့နိဂုံးချုပ်သည်အခြားလေ့လာမှုများနှင့်မကိုက်ညီကြောင်းလေ့လာမှုကဝန်ခံသည် -
အစီရင်ခံသုတ်ရည်လွှတ်လှိုင်းသို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအပေါ်ယခင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနောက်ကြောင်းပြန်ဒီဇိုင်းနှင့်ရလဒ်များကိုရောထွေးနေကြသည်၏လေ့လာမှုများမှကန့်သတ်ထားပါသည်။ ကိုးလေ့လာမှုများတစ်ဦးကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောရှုလေ့လာ1, 23-27 သို့မဟုတ်မဟုတ်တဲ့သိသိသာသာ28-30 အပြုသဘောအသင်းအဖွဲ့;3လေ့လာမှုများ27, 31-32 အဘယ်သူမျှမအသင်းအဖွဲ့အစီရင်ခံ;7လေ့လာမှုများတစ်ဦးကစာရင်းအင်းသိသိသာသာတွေ့ရှိရ4-5,10, 33 သို့မဟုတ် Non-သိသိသာသာ34-36 ပြောင်းပြန်ကြားဆက်ဆံရေး; နှင့် 1 လေ့လာမှု37 တစ်ဦး-shaped ဆကျဆံရေးကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုး4, 24-25,27, 30-32,35-36 အဆိုပါဖျောပွလေ့လာမှုများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်ကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအရသိရသည်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအန္တရာယ်အတွက်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမမူကွဲတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, လေ့လာမှုများဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖွံ့ဖြိုးဆဲမှုအန္တရာယ်ကိုမှသုတ်ရည်လွှတ်အကြိမ်ရေ၏ဆက်ဆံရေးအပေါ်သဘောမတူပါဘူး။ တစ်ဦးက ပိုပြီးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု ပိုပြီးမကြာခဏသုက်အတွက် 19% လျော့နည်းသည် non-သေစေလောက်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ (သေစေလောက်နှုန်းထားများထိခိုက်ခဲ့သည်။ ) သို့သော်များစွာသောမေးခွန်းများကိုထိုကဲ့သို့သောသုတေသီများအတွက်ထိန်းချုပ်ထားသည်အခြားဘယ်အရာကိုအဖြစ်ဖြေရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ၂၀၀၉ လေ့လာမှုတစ်ခု "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု နှင့်ငယ်ရွယ်သောအရွယ်တွင်ရောဂါလက္ခဏာပြအမျိုးသားများတွင်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်” တွေ့ရှိခဲ့ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည် ၂၀ နှင့် ၃၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးစေခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်လူကို 50 ရဲ့ထဲသို့ဝင်သောအခါအန္တရာယ်လျော့နည်းစေသည်။ လေ့လာမှုမှ
အစီရင်ခံသုတ်ရည်လွှတ်လှိုင်းသို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏လေ့လာမှုများနှင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကနေယခင်ရလဒ်များကရောထွေးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပြောင်းပြန်သတင်းပို့လေ့လာမှုများပါဝင်သည် , [အပြုသဘောဆောင်20] သို့မဟုတ်လုံးဝမအသင်းအဖွဲ့များ .
အသက်အရွယ်နုပျိုသောအသက်တာကို (20s) တွင်မကြာခဏခြုံငုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရောဂါအန္တရာယ်တိုးလာသွားရမည်အကြောင်း, က (50s) အဟောင်းများအခါရောဂါဆန့်ကျင်အကာအကွယ်ဖြစ်တို့အားထင်ရှားလေ၏။ တစ်ဦးတည်း, မကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလှုပ်ရှားမှုဟာ 20s နှင့် 30s အတွက်တိုးမြှင့်စွန့်စားမှုတစ်ခုအမှတ်အသားခဲ့ပေမယ့်တစ်ဦးတည်းလိင်ဆက်ဆံမှုလှုပ်ရှားမှုရောဂါနှင့်ဆက်စပ်မခံခဲ့ရစဉ်အခါ, 50s အတွက်ယုတ်လျော့စွန့်စားမှုနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ထင်ရှား။ ,
ဒီ 2003 ခုနှစ်စာပေပြန်လည်သုံးသပ်မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ဆီးကျိတ်ကျန်းမာရေး frequency: အဖြစ်မှန်သို့မဟုတ် Fairy Tales?"၌ Urology.
ဤရွေ့ကား Cross-Section data တွေကိုသုတ်ရည်လွှတ်၏ကြိမ်နှုန်းနိမ့်ဆီးကျေးရွာအုပ်စုလက္ခဏာတွေ, အထွတ်အထိပ်ဆီးစီးဆင်းမှုနှုန်း, ဒါမှမဟုတ်ဆီးကျိတ်အသံအတိုးအကျယ်မသက်ရောက်ရှိကြောင်းအကြံပြု; သိသာအကာအကွယ်အသင်းအဖွဲ့အသက်အရွယ်၏သဖွငျ့သက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တစ်ခုရှေးဟောင်းပစ္စည်းဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ဓမ္မဆရာနှိုင်းယှဉ်အသက်အရွယ်မရွေးနယူးယောက်ပြည်နယ်အဖြူရောင်အထီးအကြားသေဆုံးမှုပုံစံများပေးကင်ဆာသေဆုံးမှုများအတွက်လျော့နည်းသေမင်း၏အပေါငျးတို့သအကြောင်းတရားများများအတွက်လျော့နည်းခြင်းနှင့် 15% 30% ၏သေဆုံးမှုအချိုးခံစားခဲ့ရသညျ။ 19.8 မျှော်လင့်ထားကြစဉ်တွင်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကနေတကျိပ်နှစ်ပါးသောသေဆုံးမှုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
သိပ္ပံနည်းကျစာပေ၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှုအတွက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ် - ကွဲပြားခြားနားသောလိင်လှုပ်ရှားမှုများ (2010) ၏ဆွေမျိုးကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ - အောက်ပါနိဂုံးချုပ်ခဲ့သည် -
ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝကမ္မကျန်းမာရေးညွှန်းကိန်းတစ်ခုကျယ်ပြန့် penile-အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်အတူအထူးသဆက်စပ်နေကြသည်။ သည်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကျန်းမာရေးညွှန်းကိန်းနှင့်အတူ (တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်စအိုလိင်ဆက်ဆံ၏ကိစ္စများတွင်) မဆီးအတားမရှိ, ဒါမှမဟုတ်ပြောင်းပြန်အသင်းအဖွဲ့များရှိသည်။
အောက်ခြေလိုင်းမျှအောက်ဆုံးလိုင်းပဋိပက္ခဖြစ်အချက်အလက်များ၏ရုံတစ်ခုလုံးတွေအများကြီးရှိကွောငျးဖြစ်တယ်, အနည်းငယ်လက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှုခိုငျလုံအမှန်တရားအဖြစ်ထွက်ထားတော်မူ၏။ ရရှိနိုင်သောသိပ္ပံစစ်ဆေးမှုများထွက်စူးစမ်းဖို့ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအန္တရာယ်အချက်များ by ကင်ဆာသုတေသနဗြိတိန်။
မှတ်သားဖို့အရေးကြီးသည်မှာ porn-induced ED သို့မဟုတ် porn စွဲလမ်းမှုမှပြန်လည်နာလန်ထူလာသည့်အမျိုးသားများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်သန္ဓေတည်ခြင်းအား ၂-၅ လခန့်သာဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ Yourbrainonporn သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုတားမြစ်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်မဟုတ်ပါ၊ ရေရှည် abstinence ကိုထောက်ခံအားပေးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ခံခြင်းမပြုပါ။ ဤမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ၏ရည်မှန်းချက်နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဆိုင်ရာကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးများသည်ကြောက်ရွံ့မှုကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည် ယာယီ abstinence သို့မဟုတ်လျှော့ချသုတ်ရည်လွှတ်အကြိမ်ရေ။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်၏ကောင်းကျိုးများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခြင်းဆိုင်ရာသုတေသနအချက်အလက်များပိုမိုလေ့လာရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ အော်ဂဇင်များအားလုံးတူညီစွာဖန်တီးထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ“ အော်ဂဇင်၏အကျိုးကျေးဇူးများ” သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမဟုတ်ဘဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းအံ့အားသင့်စေနိုင်သည်။
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး (ယော်ဒန်မြစ်စိမ်းလန်း, ခါးပန်း)
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ပတ်သက်၍ ဒဏ္iningာရီများကိုဆန်းစစ်လေ့လာသည့် YBOP blog post - အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏အံ့ဖွယ် Rethinking
မှ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏မော်ကွန်း - တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ Psychopathology နှင့် Prostate အလုပ်မဖြစ်မှ Related ဖြစ်ပါတယ်: Quinsey အပေါ် (2012) Comment
မှ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ် - ကွဲပြားခြားနားသောလိင်လှုပ်ရှားမှုများ (2010) ၏ဆွေမျိုးကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ
Update ကို: ဇူလိုင်လ, 2017 - စိတ်ဝင်စားမှုသည်မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သောကြေညာချက်ဖြစ်သည် ရစ်ချတ် Wassersug ပါရဂူဘွဲ့, ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကျွမ်းကျင်သူ နှင့်ဌာနဆေးပညာပါမောက္ခ, ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံဦးစီးဌာန၌ဆေးပညာဌာန:
သုတ်ရည်လွှတ်မှုအကြိမ်ရေနှင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေများအကြားကျိုးကြောင်းဆက်နွယ်မှု (အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘော) ကိုပြသရန်ကျွန်ုပ်သိရှိထားသည့်ကောင်းမွန်သောတိကျသောအချက်အလက်မရှိပါ။ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့သည်အန်ဒရိုဂျင်ဆုံးရှုံးမှုရှိသော MtF အတွက်အချက်အလက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြပြီး၊ သူတို့မှာဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုအလွန်နည်းပါးပြီးအော်ဂဇင်၏စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုနှုန်းနိမ့်ကျသည်။
ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ဘက်တီးရီးယားရောဂါပိုးအများကြီးဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၏နောက်ခံအကြောင်းရင်းဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ mounting သက်သေအထောက်အထားဆီးကျိတ်ကင်ဆာတစ်ဦးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တစ်ဦးကူးစက်, လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကြောင်းအကြံပြု မကြာသေးမီကဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ တစ်ဦးနှင့်အတူဒါ့အပြင်ယောက်ျား ဘက်တီးရီးယားပိုးကူးစက်မှု လည်းဖြစ်ကောင်းကြောင့်တိုးလာရောင်ရမ်းခြင်း, ဆီးကျိတ်ကင်ဆာချီတက်ကြမှပိုပြီးခဲ့ကြသည်။
ကျန်းမာတဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့ဆီးကျိတ်ကျန်းမာရေးကိုဆန့်ကျင်အကောင်းဆုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖြစ်သက်သေပြလိမ့်မည်။ ဆီးကျိတ်ကျန်းမာရေးအပေါ်တစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုဘက်စုံလူနေမှုပုံစံစတဲ့အပြောင်းအလဲများကိုရောဂါ-မြှင့်တင်မျိုးဗီဇကို turn off နှင့်အကျိုးရှိသောသူတွေကိုသက်ဝင်စေနိုင်သည်ကိုအကြံပြုထားသည်။ လေ့လာမှုမှာ, (ဆီးကျိတ်ကင်ဆာနှင့်အတူလူနာ) ကဆီးကျိတ်ကျန်းမာရေး, တစ်နေ့လျှင်သုံးဆယ်မိနစ်လမ်းလျှောက်, စိတ်ဖိစီးမှုစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ် (ကအပတ်စဉ်ထောက်ခံမှုအုပ်စုတွင်ပါဝင်မှု, ယောဂ-based ဆန့်အသက်ရှူခြင်း, နည်းစနစ်, ဘာဝနာများနှင့်နေ့စဉ်ပဲ့ထိန်းပုံရိပ်) ကိုသိသိသာသာတုံ့ပြန် နှင့်အစားအသောက် supplements.After သုံးလ, သုတေသီများဘာသာရပ်များ '' ဆီးကျိတ်အတွက်သာမန်တစ်ရှူးများ၏ခန္ထပ်ခါတလဲလဲ။ သူတို့ကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချ-ကင်ဆာ, နှလုံးရောဂါနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ဆက်စပ်ဗီဇကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်သို့မဟုတ်အကာအကွယ်, ရောဂါ-တားဆီးဗီဇစဉ်တွင် "ပိတ်ထား" "ကိုဖွင့်။ " ဒင်း Ornish ကိုကြည့်ပါ, "သင့်ရဲ့လူနေမှုပုံစံပြောင်းခြင်းသင့် Gene ကိုပြောင်းနိုင်သလား။ " သုတေသီများက biopsies များသည်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောတစ်ရှူးများကဲ့သို့လူနေမှုပုံစံကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်လူအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိနိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည်။ ဖြစ်နိုင်သည် နေ့စဉ်ချစ်ခင် တစ်နေ့နေ့မှာတဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောအကျိုးရှိသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သကျသပွေ?
ကက်သလစ်ယဇ်ပုရောဟိတ် (1981) ကြားတွင်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာသေဆုံးမှု
ကွဲပြားခြားနားသောလိင်လှုပ်ရှားမှုများ (2010) ၏ဆွေမျိုးကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ